Author: Dait Faelkree
Shuruuradaha Qofka lsu Taagaya Doorashada. Gudidda Cadaaladdu waa hay’adda hoggaamisa maamulka Garsoorka, waxayna ka kooban tahay: Uma somalilamd qof shaqaale Dawladdeed ah inuu isu taago doorasho haddaanu muddada xeerku cayimay ka hor shaqo ka tegid codsan taas oo in laga aqbalaana ay waajib tahay.
Waa inuu haystaa shahaado somaoiland oo barasho sharciga ah oo la aqoonsanyahay. Ujeedada ayaa lagu sheegay in dadweynaha la baro xuquuqul insaanka, waajibaadka dalku ku leeyahay muwaadinka iyo xuquuqda uu qofku leeyahay labadaba.
Hay’adaha Dawadda ee Qaranku waa: Guddoomiyaha iyo Guddida Hay’adda Shaqaalaha Dawadda; x. Golaha Wakiiladu waxa uu ka doodi karaa, waxna ka beddeli karaa miisaaniyadda, kuna ansixinayaa go’aan Gole. Madaxweynuhu waa madaxa Qaranka iyo Dawladda; waana astaanta midnimada muwaadiniinta ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland. Muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerku tilmaamayo wuxuu xaq somliland Ieeyahay in la doorto, waxna uu doorto.
Uu jabo shardi ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay; ama uu gudan waayo xilkiisa. Si dhallinyarada loogu xaqiijiyo koritaanka dastuurak iyo maskaxda oo caafimaad qaba, korna loogu qaado barbaarintooda iyo dareenkooda Dawladdu waxay ahmiyad gaara siinaysaa horumarinta iyo dhiiri-gellinta ciyaaraha jidhka iyo isboortiga, kuwaas oo loo aqoonsan doono maadooyinka asaasiga ah oo ka mid ah manhajka waxbarashada dugsiyada dawladda iyo kuwa kale.
Ka qayb-gelidda shirarka caalamiga ah, isagoo ka wakiil ah Jamhuuriyadda Somaliland. Waa goob lagu fidiyo Diinta iyo hanuuninta ummadda dun iyo adduunyaba. Dastyurka asaasiga ah iyo xorriyaadka qofka.
Xaqa Dacwadda iyo lsdifaaca. Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyey; j.
Dambiyada laga gab xuquuqda qofka sida xasuuqa, di maxkamad la’aan ah, jidh dilka iyo wixii la mid ah malaha muddo dhaaf. Bannaanaanshaha Jagada Golaha Guurtida iyo soo Buuxinteeda. Qabashada xilka Madaxweynenimo marka ay jagadu bannaanaato sababahan dartood: Haddiise aqlabiyadu intaas ka yaraato, mashruuc sharcigaasi wuu burayaa.
Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Xubintu istiqaalad dhiibto, iskeedna shaqada uga tagto; Goluhuna ka oggolaado. Guddoomiyaha Golaha Guurtida ayaa leh hab-maamuuska ku-xiga.
Maqal Ciyaarta feerka ee beri-samaadkii laga dheeli jiray Soomaaliya Ciyaarta feerka ee beri-samaadkii laga dheeli jiray Soomaaliya. Xidhiidka Xukuumadda-dhexe ee gobollada iyo degmooyinka waxa caddaynaya xeer gaar ah. Haddii Golahu ka aqbalo istiqaalad.
Dawladdu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa ilaalinta iyo fayo-qabka deegaanka oo asaas u ah caafimaadka bulshadda iyo dhawrista khayraadka dalka. Labada Gole ee Baarlamaanku fadhiyo wadajir ah ayey ka yeelanayaan arrimaha ay ka mid yihiin: Labada Gole ee Baarlamanka mid waliba mashruuc-sharci uu ansixiyo wuxuu u gudbinayaa Golaha kale; si uu ula eego talooyinna uga siiyo. Oggolaan kara ama wax-ka-beddel soo jeedin kara. Haddii uu arko in mashruuc-sharcigaasi ka hor imanayo qodob ama qodobo Dastuurka, waa inuu sidaa ku wargeliyaa Shir-guddoonka iyo Xeer-ilaaliyaha Guud oo u gudbin doona Maxkamadda Dastuuriga ah.
Haddii ay bannaanaato jagada xubin ka mid ah Golaha Wakuada ka hor lixda bilood ee ugu dambaysa muddada xilka Golaha, waxa loo soo buuxinayaa dasuurka waafaqsan xeerka, iyadoo xubinta cusubi ay dhamaystirayso muddada xilka Golaha ka hadhay. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa 5. Xubinta Golaha Wakiilada loo qaban maayo, waxna loogu qaadi maayo arrin uu ogaaday ama uu Golaha soo hor-dhigay ama arrimo uu ra’yi ka dhiibay.
Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida. Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyey.
Waxa reebban in qofka lagu dirqiyo qirasho dembi, marag furid, ama dhaar. Mashruuc-sharci waxa Golaha Wakiilada u soo bandhigi kara 1. Qof kasta oo muwaadin ah ama si xeerka waafaqsan dalka ku jooga waxa uu xor u yahay in uu dalka ka maro ama ka dego meel kasta oo uu doono, iyo weliba datsuurka uu ka baxo ama ku soo Iaabto dalka marka uu doono.
Masuuliyiinta Qaranka ee Dastuurku waajibiyay in la ansixiyo, si ku-meel gaadh ah xilka uma hayn karaan muddo ka badan saddex bilood. Haddii aanay Golayaashu fadhiyin waxa Gudoomiyayaashoodu isugu yeedhayaan Golayaasha fadhi aan caadi ahayn muddo 14 maalmood gudahood ah.
Xiilli kasta waxa ku soo kordhaya tiro xubno sharaf ah oo kala ah: Ma bannaana in laga qaado xubinta Golaha Wakiilada tallaabo baadhitaan ama waraysi ama qabasho ama xidhitaan ama tallaabo kale oo ciqaab la xidhiidha iyadoo oggolaansho looga helo Golaha Wakiilada mooyaane.
Shaqada, Farsamada, Daryeelka iyo Badbaadinta Shaqaalaha. Qof kasta waxa dastuurkz ka saaran yahay daryeelka, ilaalinta iyo badbaadada deegaanka. Inuu yahay muwaadin, maskax ahaan iyo jidh ahaanba u gudan kara xilkiisa. Qof kasta wuxuu xor u yahay caqiidadiisa, lagumana qasbi karo inuu qaato tu kale.
Xuduudda Wax-ka-Bedelka iyo Kaabidda Dastuurka. Dastuueka loo baahdo hay’ado kale waa la dhisi karaa si xeerka waafaqsan. Xubnaha Guddida Culimadu waa inay yeeshaan shuruudaha hoos ku qoran: Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Eebbaha ummadda Somaliland ku beeray geyigani waxa uu ugu deeqay awood iyo karaamo Qaranimo. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha ayaa leh hab maamuuska koowaad ee Qaranka.
Mowduucyada la xiriira Soomaaliya. Qofku wuxuu xaq u leeyahay in la nabad galiyo jidhkiisa; ciqaabta jidhka iyo wax yeelo kasta oo loo geysto way reebban tahay.